ဦးခေါင်း (head) နဲ့ ဆိုင်တဲ့ အင်္ဂလိပ်စာ | ABC Radio Australia
ဦးခေါင်း (head) နဲ့ ဆိုင်တဲ့ အင်္ဂလိပ်စာ
Lesson9of 14ပြောင်းရန်
Head ​(ဦးခေါင်း) ​နဲ့ ​ပတ်သက်တဲ့ ​အင်္ဂလိပ်စကားလုံး ​အသုံးအနှုန်းကို ​လေ့လာနိုင်ပါပြီ။
‘To ​give ​a ​heads ​up’ ​- ​သတိပေးခြင်း၊ ​အသိပေးခြင်း
ဥပမာ ​- ​Just ​a ​heads ​up, ​it ​is ​your ​sister’s ​birthday ​this ​week. ​လို့ပြောရင် ​‘မင်းညီမလေးရဲ့ ​မွေးနေ့က ​ဒီတပါတ်ဆိုတာကို ​အသိပေးချင်းတာပါ’ ​လို့ ​ပြောတာ ​ဖြစ်ပါတယ်။
‘beat ​your ​head ​against ​a ​wall’ ​- ​မဖြစ်နိုင်တဲ့ ​အရာကို ​အချိန်ကုန်ခံပြီး ​လုပ်ခြင်း၊ ​ကျွဲပါးစောင်းတီးခြင်း
ဥပမာ ​- ​I ​tried ​to ​convince ​him ​to ​listen ​but ​I ​knew ​I ​was ​beating ​my ​head ​against ​a ​wall.
လို့ပြောရင် ​‘ပြောစကားကို ​နားထောင်ဖို့ ​ကျနော်ပြောကြည့်ခဲ့တယ် ​ဒါပေမဲ့ ​ကျနော် ​သိပါတယ်၊ ​ပြောရင်လည်း ​ဘာမှထူးလာမှာ ​မဟုတ်ဘူးဆိုတာ’ ​လို့ပြောတာ ​ဖြစ်ပါတယ်။
‘butt ​heads’ ​- ​တစ်ယောက်ယောက်နဲ့ ​သဘောထား ​မတိုက်ဆိုင်ခြင်း
ဥပမာ ​- ​You ​don’t ​want ​to ​butt ​heads ​with ​anyone ​on ​your ​first ​day ​at ​the ​office’ ​လို့ပြောရင် ​‘အလုပ်စတင်တဲ့ ​နေ့မှာ ​ဘယ်သူနဲ့မှ ​မသင့်မမြတ် ​မဖြစ်ချင်ကြဘူး’ ​လို့ ​ပြောတာ ​ဖြစ်ပါတယ်။
‘head ​in ​the ​cloulds’ ​- ​ဘေးပတ်ဝန်းကျင်မှာ ​ဖြစ်နေတဲ့အရာတွေကို ​သတိမပြုမိခြင်း ​(အထူးသဖြင့် ​စိတ်ကူးယဉ်လွန်သူတွေ၊ ​အာရုံစူးစိုက်မှု ​နည်းပါးသူတွေ)
ဥပမာ ​- ​The ​waiter ​has ​forgotten ​our ​order, ​his ​head ​is ​in ​the ​clouds ​today. ​လို့ပြောရင် ​‘ ​ကျနော်တို့ ​မှာထားတာတွေကို ​စားပွဲထိုးက ​မေ့နေတယ်၊ ​သူ ​ဒီနေ့ ​စိတ်ကူးယဉ်လွန်နေတာ ​ဖြစ်မယ်’ ​လို့ ​ပြောတာ ​ဖြစ်ပါတယ်။
‘head ​count’ ​လူဘယ်နှစ်ယောက် ​ရှိသလဲဆိုတာ ​ရေတွက်ခြင်း
Is ​everyone ​here? ​Let’s ​take ​a ​head ​count. ​လို့ပြောရင် ​‘လူစုံပြီလားဟေ့၊ ​စုံမစုံ ​လူရေတွက်ကြည့်လိုက်ဦးမယ်’ ​လို့ ​ပြောတာ ​ဖြစ်ပါတယ်။
‘big ​head’ ​ကိုယ့်ကိုကိုယ် ​အထင်ကြီးလွန်းခြင်း
He ​has ​such ​a ​big ​head ​since ​he ​had ​his ​photo ​in ​that ​magazine. ​လို့ပြောရင် ​‘အဲဒီ ​မဂ္ဂဇင်းထဲမှာ ​သူ့ဓာတ်ပုံ ​ပါပြီးတဲ့နောက် ​သူ့ကိုယ်သူ ​အတော့်ကို ​အထင်ကြီးနေတယ်’ ​လို့ ​ပြောတာ ​ဖြစ်ပါတယ်။
‘headstart’ ​တခုခုကို ​စောစောစီးစီးလုပ်ပြီး ​သူများထက် ​သာနေခြင်း
We ​should ​start ​the ​assignment ​tonight ​so ​we ​get ​a ​headstart. ​လို့ပြောရင် ​‘စာတွေကို ​ဒီညကစပြီး ​ကြိုတင်လုပ်ရအောင်၊ ​ဒါမှပဲ ​ရှေ့ရောက်နေမှာ” ​လို့ ​ပြောတာ ​ဖြစ်ပါတယ်။
‘From ​head ​to ​toe’ ​ခြေဆုံး ​ခေါင်းဆုံး၊ ​အားလုံး
I ​didn’t ​bring ​and ​umbrella ​so ​I ​was ​wet ​from ​head ​to ​toe. ​လို့ပြောရင် ​‘ထီးမယူခဲ့မိလို့ ​ခြေဖျားကနေ ​ခေါင်းအထိ ​တစ်ကိုယ်လုံး ​ရေတွေဆွဲကုန်ပြီ’ ​လို့ ​ပြောတာ ​ဖြစ်ပါတယ်။ 